စုံထောက်ကြီး ဖြစ်ချင်တယ် | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
အဖာတရာဖောက်စက် ရှံစား ရဲ့အံ့မခန်း CSI အစွမ်း တွေလာရောက် လေ့လာသွားပါတယ်။
လွတ်မြောက်နေတဲ့လူဆိုးများကိုဖမ်းဖို့ ဥပဒေ အစစ်အမှန် အရင်ရှာရပေဦးမည်။
ဖာရာစံရှား မမမိုးချိုသင်း ရေ ... :)
လွတ်မြောက်နေတဲ့ လူဆိုးတွေအတွက် စိတ်မပူပါနဲ့ ... ။
ရာဇ၀တ်ဘေး ပြေးမလွတ်ပါဘူး။ လောလောဆယ် လွတ်မြောက်နေတယ်လို့ ထင်ရပေမဲ့ သံသရာမှာ အဖန်ဖန်အခါခါ ခံရဦးမှာပါ။ အဲဒီဝဋ်ကတော့ လွတ်ကို လွတ်မှာ မဟုတ်ဘူး စိတ်ချ။
မမိုးချိုက ဦးစံရှားဆိုတာအခုမှ သိလို့ရီလိုက်ရတာ...
အဲဒီရွှေဥဒေါင်း ရဲ့ စုံထောက်ဦးစံရှားက အရမ်းကြိုက်ခဲ့တဲ့
လွတ်နေပြီး တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ လူဆိုးတွေကိုတော့ ဖမ်းမဲ့ ဦးစံရှားတော့ တွေ့သေးဘူးရယ်....
Cold Mountain မှာ“နီကိုကစ်မင်း”ကိုတွေ့ကောင်းရဲ့
cold caseကိုရော သဘောမကျဘူးလားဟင်။
ဟိုးအရင်က အမှုတွေပါ တူးဖော်လေ။ စုံထောက်ကြီးအားမှာတောင် မဟုတ်ဘူးနော်။
စုံထောက်ကြီး အမချိုသင်း ...း)
ညီမလည်း ဆားပုလင်းနှင်းမောင် ဇာတ်လမ်းမျိုးဆို သိပ်ကြိုက် ။ စပိုင်ရော မလုပ်ချင်ဖူးလားဟင် အဟိ ။ CSI, Alias အကုန်ကြိုက် ။ စူပါပါဝါလည်း လိုချင်သေး .. ဒါကြောင့် Heroes ဆိုလည်း ကြိုက်း)
ညီမတို့ ဘလောဂါ့တွေ စုရေးဖူးတဲ့ စပိုင်ဘလောဂါ့ဝတ္တု ဖတ်ကြည့်ပါဦးး)
"မြို့ မြစ်တာခံယူတဲ့ သားပါဗျ.."ဆိုတဲ့ ဇာတ်သီချင်းလေးကို
စုံထောက်ကြီးအမချိုသင်း သထုံလမ်းကအမှုအဖြေလေး ပေးပါအုံးဗျ။ ဘယ်လိုများ အမှုကွင်းဆက်ကို ဖော်ထုတ်လိုက်သလဲဗျာ။ ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်လေးတွေးပြန်လာတာနဲ့ အဖြေရလာတာ အံ့မခန်းဖြစ်ရပါတယ်။
မချိုသင်းက တကယ့် ဦးစံရှား ပရိတ်သတ်ပဲ။ ပုံရိပ်လဲ အရမ်းစွဲခဲ့တာပဲ။ ဒါပေမယ့် အစ်မလိုတော့ အလွတ်မရဘူး ဟဲ။ မဂျစ်တို့ ရေးတဲ့ စပိုင် ၀တ္ထု အရမ်းကောင်းတယ်။ ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြည့်လိုက် အစ်မ။ (၀င်ကြော်ငြာ ပေးသည်။)
၀ါသနာတူတွေတွေ့ ပြီ။ လင်းကတော့ အရင်တုန်းက လုပ်စရာမရှိ တနေ့ တနေ့ ရည်းစားကို တချိန်လုံး ရှဲဒိုးလိုက်နေတာ။ ကိုယ့်ကွယ်ရာမှာ ဘာများလုပ်မလဲလို့ လေ။ ဟိဟိ
စုံထောက်ကြီး မိုးရှံစား ခင်ဗျား လွတ်မြောက်နေတဲ့ လူဆိုးတွေကို တရားဥပဒေနဲ့ အရေးယူလို့မရရင် ဂျိမ်းဘွန်းကို မတရားဝင်တိုက်ပစ်လိုက်ရင် ရမယ်ထင်ပါတယ်.. :D
ဘယ့်နှယ် ဦးစံရှား ဖြစ်ရမှာလဲ။ ဦးရှံစားနဲ့ ဦးဒိန်းဒေါင်ပါ။ ဥိးသိမ်းမောင်လဲ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီကလေးတွေနှယ်၊ တယ်လဲ စိတ်ကူးယဉ်တာကိုး။
အမရေ တူးကတော့ငယ်ငယ်က ဦးစံရှားနဲ့ ရှားလော့ဟုမ်းတွေဖတ်ပြီးရင် စုံထောက်ဝတ္ထုရေးချင်တာ။ ဒါပေမယ့် တခါမှ မအောင်မြင်ဘူး :P နောက်ပြီး ချာလီအိန်ဂျယ်ထဲမှာ တူးက ကိတ်ဂျက်ဆင် . .. ဟဲဟဲ။ အိုင်ဆေးကိုသိန်းမောင်ရေ ဆိုတဲ့ အပြောလေးကို အလွန်သဘောကျပေါ့။ တူးအဖေ လူပျိုတုန်းကခဲတဲ့ ဆေးတံဟောင်းကြီးကိုက်ပြီး မှန်ဘီလူးအဝိုင်းလေးကိုင်၊ လယ်ပင်းမှာ မာဖလာလေးပတ်လို့ ဦးရှံစား (ဦးစံရှားဟုတ်ဘူးနော်) လုပ်တမ်း ကစားခဲ့တာ သတိရတယ်။ အမရေ … မှားတဲ့အခါလည်း များပေမပေါ့။
ချိုစံရှားတို့ ကတော့ လုပ်ပြီ… တကယ့်ပါးပါးလေးပဲ… တော်ပ့ါ…
မချိုသင်းရေ.....ကျွန်မလည်း ခရီးထွက်နေဆဲမို့ မဖတ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေ ခုမှ အမြန် အပြေးအလွှား လာကြည့်သွားပါတယ်။ စာတွေက ကောင်းတော့ ခရီးဆုံး အိမ်ပြန်ရောက်မှ သေသေချာချာ ပြန်ဖတ်ပြီး အတွေးချဲ့ရဦးမယ်။ အရင်တပတ်က မချိုသင်းတို့မြို့ကြီးဖက် ရောက်သေးတယ်။ ဘယ်လို ဆက်သွယ်ရမှန်း မသိလို့ မတွေ့ခဲ့ရဘူး။ နောက်တစ်ခါပေါ့။ ယူကေဖက် ရောက်မယ်ဆိုရင် ပြောပါနော။
မမရေ ပျင်းလို့ ကိုမာယာကို စကားနိုင်လုလိုက်အုံးမယ်။
ဦးစံရှား နဲ့ ဦးသိမ်းမောင်က မူလ၀တ္ထုဇာတ်လိုက်နာမည်
ဦးရှံစား နဲ့ ဦးဒိန်းဒေါင်က အထက်က ၀တ္ထုဇာတ်လိုက် တွေကို ပြောင်တဲ့ ကာတွန်းဇာတ်လိုက်နာမည် လို့ သိထားပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း အဲဒီနာမည်လေးလုံးဟာ အမြဲမှားနေတတ်ပါတယ် များသောအားဖြင့် ဦးရှံစား ကာတွန်းကို ဖတ်နေပေမဲ့ ဘာဖတ်နေလဲလို့ သူများမေးရင် ဦးစံရှားလို့ ဖြေမိတတ်ပါတယ်။ အမှတ်တမဲ့ အလွဲများပါ ဆရာမာယာ။ :))
ကျုပ်တို့ ကလဲ လူရိုးကြီးတွေဆိုတော့..
သထုံလမ်း လူသတ်မှုကို သွားကြည့်ပြီးတဲ့နောက်....
ည ဘက်ရောက်တော့... အိပ်ပျော်ရဲ့ လား...။
ဆေးတွေ ဘာတွေသောက်ပြီး ဘေးမှာ အဖေါ် ခေါ်အိပ်ရသေးလား သိချင်တာပါ...။
မြတ်နိုး ဆီမှာ အမှူ တခုရှိပါတယ်။ အဟီး
အမ အောက်ဆုံးက အမှူ ကိုဖြေရှင်းပေးပါ။ အလုပ်အပ်လိုက်ပီနော်..။
အခုတလောကလဲ သတင်းတွေ ဖတ်လိုက်ရင် ဘယ်နားမှာတော့ လူသတ်သွားပြန်ပြီ၊ ပစ္စည်းတွေတော့ ဘယ်လို လုသွားပြန်ပြီနဲ့၊ ဒါတွေပဲ ဖတ်နေရတာ များတော့ အမတယောက် စုံထောက်ဖြစ်ချင်လာတယ်နဲ့ တူတယ်။ :)
စုံထောက်ကြီး အကြောင်း ဖတ်သွားပါတယ်။ ဒါနဲ့ အစ်မ..
အစ်မရဲ့ ညီမ ဒေါက်တာ တစ်ယောက် ရှိပါတယ်... ဖန်မီးအိမ် ဆေးခန်းဖွင့်တဲ့ အစ်မလေ... ခု သူရော ရန်ကုန်မှာပဲလား...
ကို မောင်လူအေး သို့
ဖန်မီးအိမ် ဆေးခန်းဖွင့်တဲ့ အမ က မနှင်းပါ။ မိုးမိုးနှင်း ပါ။ သူက ကျမအထက်က အမအငယ်ပါ။ သူက အခု Belgium မှာ နေနေပါတယ်။ မနှင်း သူငယ်ချင်းလား။
မှန်း ကိုဝဏ္ဏကြီးကို ဘယ်လိုစစ်တုန်း
ဒါမှမဟုတ်... ပွဲကြမ်းပြီး စစ်တာလား..
ဟီ..ဟိ ပြောမရဘူး...ဘူမိဆင်းဆိုတော့ ကြောက်ရတယ်။
ဘိုးဘိုးကြီးရဲ့..မာဖလာ နဲ့ ဆေးလိပ်တို..
ဖာတရာဖောက်စက်ရယ် ကြက်ကလေးစမစ်ရယ်ကို သဘောကျတယ် စုံထောက်ကြီးမိုးစံရှားကို အမှု့အပ်မယ် နော် ယူကေမှာ ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီး ပျောက်ကွယ် နေတာ ကို စစ်ပေး။
(ဖီးကြမ်းစားချင်လို့ အဟိ၊ ဒီမှာ ဆင်စွယ် ဘဲရတယ် အဲလေ.. ရခိုင်ငှက်ပျောသီးဘဲ ရတယ်)
OBAMA ကတော့ စိတ်ပုပ်တဲ့ အမေရိကန်ပြည်မှာ လူဖြူ လူမဲ မခွဲပဲ ပြည်သူတွေ ရွေးတဲ့အတိုင်း အနိုင်ပေးလို့အာဏာရသွားတာလေ။
သမီးတို့ ရဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကို ချစ်တဲ့ အာဏာရ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကတော့-------
သခင်မျိုးဟေ့ တို့ စရာ
အရေးတော်ပုံ ငံပြာရည် ကို စိန်စီသော ပန်းကန်မှာ ထဲ့ပြီး ညနေစာ စားနေတယ်။
စုံထောက်ကြီးရေ့ အလုပ်ရှုပ်နေတာနဲ့ အိမ်မလည်ဖြစ်လို့ ခုမှ ရောက်တယ်။
columbo ဇာတ်လမ်းတွဲတွေရော မကြိုက်ဘူးလား..
ချိုသင်းရေ....ပို့စ်အဟောင်းလေးတွေ လာဖတ်ရင်းနဲ့ ဒီပို့စ်ရောက်တော့ မမန့်ရင် မနေနိူင်တာကလွဲလို့...ဖြစ်သွားတယ်...။ အမရဲ့ ယမမင်း ပို့စ်ထဲက ပေးမယ် ဆိုပြီး မပေးတဲ့ ရူးချင်ယောင်ဆောင်သူတွေရယ် ၊ သူခိုးဖမ်းခြင်း ပို့စ်ထဲက လွတ် လွတ် နေတဲ့ မျက်ပြူးလို သူခိုးအကြီးစား ကြီးတွေရယ်...၊ ချိုသင်းရဲ့ ဒီ ပို့စ်ထဲက လူဆိုးကြီးတွေရယ်...၊ တူများနေလား သိဘူး နော်....။